Manontany Tena ny Shinoa Raha Manamainty Ny Havokavok’izy ireo Tahaka ny Fiaran-Dalamby Haingam-pandeha ny Zavon-tsetroka · Global Voices teny Malagasy
Manontany Tena ny Shinoa Raha Manamainty Ny Havokavok'izy ireo Tahaka ny Fiaran-Dalamby Haingam-pandeha ny Zavon-tsetroka
Voadika ny 17 Janoary 2017 14:58 GMT
Lamasinina haingam-pandeha miala ao Shanghai mankany Beijing feno loto avy amin'ny setroka. Sary namboarina tao amin'ny Weibo.
Nandray ny taona 2017 tamin'ny zavon-tsetroka matevina sy maharitra ny Shinoa, izay nampahatezitra ny toe-pon'ny olona maro tamin'ny taombaovao. Nipoaka ny fahatezeram-bahoaka noho ny loto henjana tao amin'ny faritra avaratr'i Shina efa ho tapa-bolana, ary nahatonga ny sasany hametra-panontaniana mikasika ny fahombiazan'ny fitondran'ny Antoko Komonista Shinoa tao amin'ny media sosialy ny tsy fisian'ny vahaolana.
Tonga tamin'ny endrika sary mampiseho fiaran-dalamby haingam-pandeha rakotra tseroka matevina rehefa avy nandalo faritra feno zavon-tsetroka ao Beijing ny fanoharana manafintohina indrindra momba ny faharatsian'ny toe-draharaha. Nalaza tao amin'ny aterineto ny sary ary niteraka adihevitra mafana tao amin'ny Weibo sehatra Shinoa malaza. Eto ambany ny fantina fanehoan-kevitra setrin'ny sary:
Tsy mino aho fa ho ela velona hatramin'ny 80 taona. Jereo ny lamasinina ary jereo ny mitranga amin'ny havokavotsika. Tratran'ny homamiadan'ny havokavoka avokoa ny raibeko, ny nenitoako sy ny dadatoako.
Tena mahatsiravina izany. [Ny tseroka eo amin'ny fiaran-dalamby dia azo sasàna] saingy tsy afaka manasa ny havokavotsika kosa isika.
Noho ny antoko sy ny fanjakana, tena mamelona ahitana otrikaina ABCDEFG ny zavon-tsetroka.
Nalain'ireo fampahalalam-baovao sasany ao an-toerana ny tantara ary namafisina fa nalaina tamin'ny 2 Janoary taorian'ny fandalovan'ny lamasinina haingam-pandeha tao Shanghai hihazo an'i Beijing ny sary. Namaly ny vaovao ihany koa ny manampahefanan'ny lalamby fa tsy mahazatra ny mahita fiaran-dalamby rakotra loto raha ambany ny kalitaon'ny rivotra.
Efa imbetsaka ny fahalotoan'ny rivotra ao amin'ny faritra avaratr'i Shina no ambonin'ny taha ara-dalàna 25 mikrograma isaky ny metatra toratelo amin'ny mpandoto PM 2.5 an'ny Fikambanana Iraisampirenena momba ny Fahasalamana ary nanomboka tamin'ny fanairana mena ny taona 2017 izay ambonin'ny 300 mandritra ny 72 ora mahery ny taha PM 2.5.
Naverina nalefa efa ho an'arivony mahery ny lahatsoratra iray avy amin'ilay mpamokatra sarimihetsika Shinoa fanta-daza Lu Chuan, izay mitanisa ny fanamarihan'ny dokotera momba ny vokatra mety mampidi-doza ateraky ny setroka:
[…] Isika Shinoa amin'ny ankapobeny dia tsy manam-pahalalana momba ny setroka ary mahalana vao mandray fepetra, toy ny manao saron-tava, satroka, fehin-tenda sy fonon-tanana iadiana amin'ny setroka […] Tsy hivoaka mandrakizay ny setroka tafiditra any anaty vatana ary miafara amin'ny aretina. Amin'ny ankapobeny, hanomboka harary ny olona, folo taona na roapolo taona aty aoriana (homamiadan'ny havokavoka, emphysema (binabina), aretin'ny lalan-drivotra, sohika……, ireo izay malemy kokoa dia mety ho tratran'ny homamiadan'ny havokavoka vetivety). Nilaza ny dokotera fa isaky ny mahita olon-dehibe mitondra ankizy ivelan'ny trano dia marary ny fony. Satria fohy ny lalan-drivotry ny ankizy, manatelina setroka bebe kokoa noho ny olon-dehibe izy ireo ……
Nampitandrina i Zhong Nanshan, mpampianatra ambony malaza fa mety hiteraka aretina lehibe toy ny homamiadana ny setroka. Nanombatombana ny Fikambanana tsy mitady tombontsoa Berkeley Earth ao California fa niteraka fahafatesana mialoha 1,6 tapitrisa isan-taona ao Shina ny setroka.
Maro koa anefa ireo fanehoan-kevitra amin'ny aterineto nandray ny tsikeran'ny zavon-tsetroka ho toy ny anti-Shina. Na i Wang Zhanyang, mpampianatra ao amin'ny Kolejin'ny Foibe Sosialista, sampan'ny Antoko Komonista Shinoa aza tsy mahazaka mahita fitiavan-tanindrazana tafahoatra tahaka izao ary naneho hevitra manohitra ny fametahana marika ara-politika tao amin'ny Weibo:
Ny fahamarinana ara-politika sy ny zavon-tsetroka: Nilaza ny olona sasany fa rehefa miatrika zavon-tsetroka goavana, tsy afaka mamboraka, tsy afaka mitsikera, tsy afaka mitaraina, tsy afaka mampiseho ny tena antony isika raha tsy hoe anti-Shina ianao, mpamadika sy mpiara-miasa [amin'ny mpamadika]. Mety ara-politika ve fa tokony miaina amin'ny zavon-tsetroka tsy mila mitaraina ny olona, na miaro izany koa aza? Raha manohitra ny natioran'olombelona sy ny mahaolombelona ny fetezana ara-politika […] mety ve izany? Ankoatra izany, nilaza [ny antoko] fa tsy maintsy miatrika ny tsy fahafahampon'ny daholobe isika, kanefa ankehitriny, petahanao fiampangana ara-politika tahaka izany ny tsy fahafaham-pon'ny daholobe, inona no fikasana ao ambadik'izany?
Mpianatra sekoly fanabeazana fototra manao taranja fanatanjahan-tena ao anatin'ny trano lay lehibe nampidirana rivotra madio. Sary avy amin'ny fampahalalam-baovaon'ny fanjakana Xinhua.
Mandritra izany, manohy manasongadinana ny ezaka famahàna ny olan'ny setroka ny fampahalalam-baovaon'ny fanjakana. Nitatitra ny Isanandrom-Bahoaka na People's Daily fa sekoly fanabeazana fototra iray ao Shijiazhuang, iray amin'ireo tanàna maloto indrindra ao amin'ny faritanin'i Hebei, no nanatontosa fanabeazana ara-batana ho an'ny mpianatra tao anatin'ny tranolay goavana nanabontsinana rivotra madio. Niteraka fanehoan-kevitra miabo sy miiba ny fepetra noraisin'ny sekoly :
Tokony hahatsiaro faly sa malahelo momba izao ve isika?
Amin'ny ho avy, ho tahaka ny legioma, mitombo ao anatin'ny trano lay ny olombelona…
Ka, faly ve ianao?
Na dia eo aza ny setroka matevina, Shinoa maro no mbola nisafidy nivorivory tao amin'ny Kianjan'i Tiananmen ny marainan'ny Andron'ny Taombaovao mba hitazana ny fananganana sainam-pirenena:
Niteraka fanehoan-kevitra esoeso antserasera niantso azy ireo hoe “olombelona nofo mpanadio rivotra” ireto vahoaka tia tanindrazana ireto.
Amin'ny maha mpamokatra karbona lehibe indrindra manerana izao tontolo izao azy, miankina amin'ny arintany ny 60 isan-jaton'ny herinaratra ao Shina. Nanambara ny fikasany hampihena hatramin'ny 60 isanjato ny famokarana etona mampidi-doza avy amin'ny orinasan'ny arintany mandritra ny dimy taona manaraka ny governemanta, saingy hiverina hiakatra alohan'ny taona 2030 alohan'ny hanombohan'ny fihenany izy io nandritra ny fifanmpiraharahana momba ny Toetr'Andro tao Paris tamin'ny taona 2015 .